Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina avy any Budapest mankany Dubai amin'ny flydubai izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Manompo na mpizahatany na mpizahatany, ny fahatongavan'i flydubai dia hanamafy ny fahafahan'ny Budapest Airport ho ivon-toerana iraisam-pirenena lehibe indrindra. Ny fizarana kaody amin'ny Emirates amin'ity zotram-pitaterana ity dia manokatra toerana 190 mihoatra ny seranam-piaramanidina ahitana an'i Azia, Afrika, Aostralia ary Etazonia.
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia manamarika ny fifandraisan'ny flydubai voalohany mankany Dubai avy amin'ny renivohitr'i Hongria.
Ny serivisy inefatra isan-kerinandro any amin'ny tanànan'ny Moyen Orient dia hiasa mandritra ny taona.
Ny fahatongavan'i flydubai dia manitatra tokoa ny fifandraisan'ny vavahady Hongroà amin'ny hub Dubai.
Mankalaza ny fahatongavan'ilay mpiaramiasa vaovao farany, Seranam-piaramanidina Budapest nanamarika ny fifandraisana voalohany nataon'i flydubai tamin'i Dubai avy amin'ny renivohitr'i Hongria. Ny serivisy inefatra isan-kerinandro any amin'ny tanànan'ny Moyen Orient dia hiasa mandritra ny taona ary hanitatra tokoa ny fifandraisana amin'ny vavahady Hongroà amin'ny hub Dubai.
Tamin'ny fanombohana, Balázs Bogáts, Lehiben'ny fampandrosoana Airline, Seranam-piaramanidina Budapest Hoy ny fanamarihana: “Ny fanompoana na ny mpanao dia lavitra na ny mpizahatany, ny fahatongavan'i flydubai amin'ny rollcall mpitatitra anay dia hampivoatra ny fahafahantsika hanana ivon-toerana iraisam-pirenena manan-danja tokoa. Ny fizarana kaody amin'ny Emirates amin'ity zotra ity dia manokatra toerana 190 mahery ho an'ireo mpandeha ao aminay toa an'i Azia, Afrika, Aostralia ary Etazonia. ”
Ghaith Al Ghaith, CEO, flydubai, dia nilaza hoe: "Nahita fitomboan'ny fangatahana dia lavitra izahay amin'ity fahavaratra ity ary amin'ny fanombohan'ny sidina mankany Budapest, dia manitatra ny tamba-jotra amin'ny fandaharam-potoanan'ny ririnina izahay mba hanomezana safidy bebe kokoa ho an'ireo mpandeha. Ny fampandehananay vao haingana mankany Hongria dia hanamafy ny fifandraisan'ny UAE ihany koa. ”
Flydubai, Dubai Aviation Corporation ara-dalàna, dia orinasam-panjakana misy teti-bola ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra miaraka amin'ny foiben-toerany sy ny asany amin'ny sidina ao amin'ny Terminal 2 amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai. Ny zotram-piaramanidina dia miasa amin'ny toerana itodiana 95, manompo ny Moyen Orient, Afrika, Azia ary Eropa avy any Dubai.
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Budapest Ferenc Liszt, fantatra amin'ny anarana hoe Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Budapest Ferihegy ary mbola antsoina ankehitriny hoe Ferihegy, no seranam-piaramanidina iraisampirenena manompo an'i Budapest renivohitra Hongroà, ary ny lehibe indrindra amin'ny seranam-piaramanidina efatra an'ny firenena.
Seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai (IATA: DXB, ICAO: OMDB) no seranam-piaramanidina iraisampirenena voalohany manompo an'i Dubai, Emira Arabo Mitambatra, ary seranam-piaramanidina be olona indrindra eran'izao tontolo izao ataon'ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha iraisampirenena. Io koa no seranam-piaramanidina feno fahasivy ambin'ny folo be indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana, ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina be olona indrindra eran'izao tontolo izao, ny seranam-piaramanidina be mpandeha indrindra ho an'ny hetsika Airbus A380 sy Boeing 777, ary ny seranam-piaramanidina manana mpandeha betsaka indrindra isaky ny sidina